[2017-10-23 오후 7:18:00]
बिहानै गाउँमा हल्ला फैलिन्छ फलानो त मरेछ। छरछिमेकिहरु भेला हुन्छन् । रुदारुदै बेहोस भएकी मेरि आमालाई सम्हाल्ने प्रयास गर्छ्न केहि महिलाहरु। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफुलाई अनि पुरै परिवारलाई सम्हाल्न सक्ने मेरो बुबा आज आफुलाई सम्हाल्न नसकेर मेरो लासलाई हेर्दै बरबर आँसु झार्नुहुन्छ। गलत बाटोमा लाग्ला भनेर आफ्नो भन्दा मेरो धेरै ख्याल गर्ने मेरो दाजु आज मेरो लास हर्न नसकेर कुनै कुनामा बसेर रुन थाल्छन् ।
आफुलाई भन्दा धेरै माया गर्ने मेरा दिदिबहिनी मेरो लासलाई झम्टिदै रुन थाल्छन्। गाउँका मानिसहरु भेला भएर जति सक्यो छिटो मेरो लासलाई पार लगाउने तयारिमा लाग्छ्न। मैले लगाएका कपडाहरु फुकाल्न थालिन्छ। म सुत्ने गरेको बिस्तारा सबै सफा गरिन्छ। मसङ्ग सम्बन्धित हरेक कुराहरु खोलामा बगाउन जम्मा पारेर राखिन्छ। मेरो शरीरमा कात्रो ओढाइन्छ। बासको अर्थिमा मेरो लासलाई राखेर माथिबाट रसि लगाएर कसिन्छ। बिहेमा जन्ती जान तयार भए जस्तै अब मलामी जान तयार हुन्छन्।
त्यही मलामिको भिडमा एउटा मेरै गाउको ब्यक्ती आफ्नो गोजीमा तास बोकेर आउँछ। किन तास बोकेर आएको भन्ने प्रश्नमा उसले उत्तर दिन्छ " त्यत्रो बेर लास जलुन्जेल के गरेर बस्नु त्यहाँ ?"लास लगेर कुनै नदिको किनारमा बिसाइन्छ। म आफ्नो लास हेर्दै सोच्न थाल्छु "मेरो मृत्युले कसलाई फरक पर्यो यहाँ ?"
मसङ्ग सबैभन्दा मिल्ने साथी १ हप्तामा मलाई बिर्सन्छ। कहिलेकाहीँ कतै जादा कहिकसो यादमा आउने गर्छु म उसको। म तिमी बिना बाच्नै सक्दिन भन्नेले २,४ महिनामै अर्कैसङ्ग मायाप्रेममा मस्त भएको देख्छु म। फेसबुकमा मिस यु लेखेर पठाउनेहरु RIP लेखेर आफ्नो कर्तब्य पूरा गरेको देख्छु म मानौ उनिहरुको RIP ले मलाई स्वर्गमा एउटा सिङ्हासन मिल्ने छ। मेरो मृत्युले एकदिन म पढेको बिद्यालय वा कलेज बिदा हुनेछ ,अनि त्यही बिदाको दिन सबैको लागि रमाइलो गर्ने, घुम्न जाने दिन बन्छ। झुक्किएर कलेजको छुट्टी चलिरहेकै समयमा पर्यो भने मलाई गाली गर्न पनि पछि पर्दैनन केही बिद्यार्थिहरु।
लास जलाउने समय हुन्छ। मेरो लासलाई दागबत्ती दिदा मेरो बुबाको मनमा के गुज्रिएको होला। जुन हातले समातेर मलाई हिंड्न सिकाउनु भयो, जुन हात समातेर मलाई लेख्न सिकाउनु भयो, जसको बोली सुनेर मैले बोल्न सिके आज त्यही ब्यक्तिलाई आफ्नै हातले जलाउदा सायद मनमा मेरो बुबा जिउदो पक्कै पनि हुनुहुन्न। यो दिन देख्नको लागि पक्कै मेरि आमाले मलाई जन्म दिनु भएको थिएन। म मर्नुको सट्टामा बरु आफै मरेको भए हुन्थ्यो भनेर सोच्ने केबल मेरा बुबाआमा मात्र हुनुहुन्छ।
म अहिले सोच्छु आखिर किन गरे मैले आत्महत्या? कुनै एउटा केटि वा केटाको मायामा धोका पाएर? मैले पढ्न चाहेको बिषय पढ्न नपाएर? मैले भनेको कुरा मेरा बुबा आमाले पूरा गर्न नसकेर? मैले रोजेको ब्यक्तिसङ्ग बिहे गर्न नपाएर? मैले आफ्नो पढाईमा सफलता नपाएर? म जान खोजेको देशमा जान नपाएर? सामाजिक संजालमा मेरो बदनामी भएर?
मृत्यु पछि म प्रष्ट देख्न सक्छु मेरो मृत्युले कसैलाई फरक परेन। सबैको जिन्दगी जस्तो थियो उस्तै चलिरहेछ। फरक पर्यो त केबल मेरा बुबाआमा, मेरा दिदिबहिनी अनि मेरा दाजुभाइलाई। मलाई धोका दिने ब्यक्ति आफ्नै नयाँ प्रेमी/प्रेमिकासङ्ग मस्त छ। मैले चाहेको, बिषय भन्दा पनि सामान्य बिषय पढेर धेरै प्रगती गर्न सकिने रहेछ। मेरो इच्छा पूरा गर्न मेरा बुबा आमा रात दिन खट्नुहुदो रहेछ। मैले बिहे
गर्ने भनेको ब्यक्ति म भन्दा पनि राम्रो ब्यक्ति पाएर मख्ख छ। दुनियाँमा फेल हुने म मात्र होइन रहेछ।
हरेक सफल ब्यक्ती कुनै न कुनै समयमा अवस्य पनि फेल भएको रहेछ। मैले मेरै देशमा पनि मिहिनेत गर्न सके भने सफलता पाउन सक्दो रहेछु। मेरो बदनामिको समाधान मेरो मृत्यु होइन रहेछ। मेरो मृत्युले मलाई सामाजिक संजालमा मेरो बदनामि गर्नेहरुलाई अझै हौसला दिने रहेछ। त्यसको समाधान त डटेर गर्नु पर्ने रहेछ।
तर म फर्किएर जान सक्दिन, रोइरहेका मेरा आमाबाबुको आसु पुछ्न सक्दिन, न म मेरो गल्ती नै सुधार्न सक्छु। म मेरो लास हेरेर सोच्छु मैले गल्ती गरे, धेरै ठूलो गल्ती गरे।